Fitakiana an’ireo nosy kely manodidina :: Nikatso teo amin’ny resaka fiandrianam-pirenena ny fifampidinihana • AoRaha
Fitakiana an’ireo nosy kely manodidina Nikatso teo amin’ny resaka fiandrianam-pirenena ny fifampidinihana
Tsy mbola hita ny marimaritra mika­sika ny fitakiana ny famerenana an’ireo nosy kely “Iles éparses” amin’i Madagasikara. Tsy nisy ny fehin-kevitra tapaka taorian’ny fiha­onana savaranonando nandinihan’ny delegasiona malagasy sy ny delegasiona frantsay, teny amin’ny lapan’ny Praimi­nisitra teny Andafiavaratra, omaly. Nihodinkodina teo amin’ny hoe: iza marina no tena manana ny fiandrianany ho afaka hitantana an’ireto nosy kely ireto, eo amin’i Mada­ga­si­kara sy i Frantsa, ny fifanatrehana.
Ny Praiminisitra Ntsay Christian, nitarika ny delegasiona malagasy, no nampahafantatra tamin’ny lehiben’ ny delegasiona frantsay ny fiandrianan’ny fitondram-panjakana malagasy amin’ny fitantanana an’ireto nosy kely ireto, miainga amin’ny fampiharana ny fehin-kevitra nivoaka nandritra ny fivoriamben’ny Firenena Mikambana, efapolo taona lasa izay.
Nikatso teo amin’io fama­­ritana ny fiandrianan’ny firenena ho masi-mandidy amin’ ny fitantanana an’ireto nosy kely io ny dinika. “Nanohana ny heviny tamin’ny alalan’ny fampahafantarana ny lalàna iraisam-pirenena mamaritra an’izany fiandrianan’ i Frantsa amin’ny fitantanana an’ireto nosy kely ireto izany ny delegasiona frantsay”, hoy ny fampitam-baovao niarahan’ ny delegasiona roa tonga navoaka, omaly.
“Mbola tokony hisy dinika mialoha, araka izany, ny fanaporofoana ny fiandrianan’ny firenena Malagasy amin’ny fitantanana an’ireo nosy kely manodidina an’i Madagasi­kara ireo”, hoy hatrany io fampitam-baovao io.
Naharitra adiny enina mahery ny fifampiresahana teny Andafiavaratra. Nambaran’ i Marcel Escure, lehiben’ny delegasiona misolo tena ny fitondram-panjakana frantsay taorian’ny fihaonana fa: “ny fanatanterahana ny fanapahan-kevitra niraisan’ny Filoha malagasy sy ny Filoha frantsay, tany Paris, tamin’ny 19 mey 2019 teo no antom-pisian’ny fihaonana”. “Ny fitadiavana vahaolana iraisana no tanjona amin’izany. Mahavelom-bolo ny dinika”, hoy izy.
Tsy nety namaly ny fironan’ ny adihevitra, na mety hisian’ ny fiaraha-mitantana na fame­renana amin’i Madagasikara an’ireto nosy kely manodi­dina na “Iles éparses” ireto, i Marcel Escure. “Mizotra any amin’ny fampandrosoana miaraka izany saingy vao manomboka moa ity ny fivoriana”, hoy fotsiny izy sady nampahatsiahy fa iraka fotsiny ihany no tanterahiny fa ireo Filoha roa tonta no tompon’ ny teny farany mikasika an’izao fifanarahana izao.
Raha tsy misy ny fiovana dia mbola hitohy amin’ny fiandohan’ny volana desambra 2019 ho avy izao, any Paris, renivohitr’i Frantsa, ny fifampiraharahan’ny delegasiona roa tonta.
Famoahana taratasin’ny mpamily sy ny fiara :: Alohan’ny faran’ny taona vao am-perinasa ny ivon-toerana eny Atsimondrano